कोमल ओलीलाई मार्मिक चिठी'इमानको राजनिति गर्न खोजेर गल्ती गर्‍यौ दिदी ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाण्डौं। कोमल ओलीलाई मार्मिक चिठी’इमानको राजनिति गर्न खोजेर गल्ती गर्‍यौ दिदी !’ प्यारी दिदी कोमल, सञ्चै आरामै छौँ ? जब तिमी राजनिति मार्फत देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर हाम फाल्यौँ तिम्रो र मेरो दैनिक हुने भेटघाट आजभोली पातालिएको छ ।
फोनमा हुने संवाद हराएको छ । तिम्रो व्यस्ततालाई मैले बुझिदिनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक रुपमै तिमीलाई चिठी लेख्दै छु । आशा छ अवश्य समय मिलाएर पढ्ने छौँ । मेरी प्यारी दिदी तिमि गाउँको एउटा साधारण परिवारमा जन्मिनु तिम्रो पहिलो गल्ती थियो, दोस्रो गल्ती तिमि कलाकार भएर सबैलाई मनोरंजन दिनु,चर्चा पाउनु नै हो । तेस्रो तिमि देशबिदेश गीत गाउँदै हिड्न छोडेर राजनीती मार्फ़त देश र जनताको मुहार फेर्छु भनेर सोच्नु ठूलो गल्ती भो ।
दिज्जू यहाँ बर्षौ देखि राजनितिक पार्टीमा लागेकाहरू भर्खर केहि बर्ष मात्रै त भयो नि पजेरो चढ़ने भएका, भर्खर त आफ्ना र आफन्तका नाममा बिभिन्न बंगला र टावरहरु बनाउदै छन । ए मेरी दीदी तिमि किन बुझदिनौ ? नेपालको सन्दर्भमा राजनीती भनेको ( कमाई खाने, भजाई खाने, ठगी खाने भाँडो हो भनेर ? जनता मारेर नेता धनि हुने देश हो भनेर, नैतिकताको राजनीती कहाँ छ र यहॉं ? यो सिद्धान्त त तिम्रो होइन, अनी कसरी मार्छेयौ आफ्नो इमान्दारिता र निष्ठालाई यो फोहोरी राजनीतिमा लाग्नको लागि ? त्यसमाथि महिलाहरुलाई हेर्ने दृश्टिकोण र गर्ने ब्यबहार को त कुरै नगरौं यहॉं राजनीतीको ? नजानेपनी आफ्ना श्रीमती, नातेपाते जति चाही सबै सक्षम हुन्छन्, यहॉं बोलाई र गराई फरक हुन्छ, अरबौ रकम तिरेर सभासद र मन्त्री हुने देशमा, बिदेशी भूमिमा बसेर नेपाल डलर पठाएर पार्टी फुटाउने देशमा, तिमि निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीती गर्न खोज्दै छौ । राजनीती त भ्रस्टाचारी, काला ब्यापारी, नेताहरुको पेवा सम्पति पो हो । दिज्जू, अनी कहाँ जान दिन्छन तिमीलाई माथि ? , यहाँ आफू असफल भएको भन्दा अरु सफल भएकोमा दुःख मान्ने र खुट्टा तान्नेहरु बढ़ी भएको देशमा राजनीती तिम्रो लागि हुदै होइन, अब यहाँ नेपालीहरू होइन राजनितिक दलका कार्यकर्ता मात्रै छन, सबै तेरो र मेरो, यो दल र ऊ दलको भन्नेहरू मात्रै छन, तर तिमि सबैलाई एउटै देख्छेउ नेपाली, तेसैले राजनीती तिम्रा लागि हुदै होइन । जनताको अरबौं रकम लूटने भ्रस्टाचारीहरुलाई सुद्ध पार्ने,बचाउने चोखा वकीलसाबहरु देखि बिदेशमा बसेर डलर पठाएर पार्टी फुटाउने र आफुलाई देश भक्त भन्ने महिला सम्म तिम्रो खेदो खन्न लागि परेका छन, ताकि तिम्रो राजनीति समाप्त होस । जो आफै असत्य र अधर्म को मार्गमा हिडीरहेका छन तिनीहरुको झुण्डनै तिम्रो बिरुद्ध लागिपरेका छन । ए मेरी दीदी तिमि सोझो छौ यदि तिमीले जालझेल जानेको भय आज सिलवालले टिकेट पाउदा तिमीलाई बचन दिएर पनि टिकेट नपाउने हुदैन थियो होला, तेसैले ए मेरी दीदी राजनीती तिम्रो लागि हुदै होइन ।
दि, मैले त तिमीलाई भनेकै थिए यो सतिले सरापेको देश हो, त्यसमाथि महिलाको लागि राजनीती नेपालमा के कुरा अमेरिकामा हिलरी क्लिंटनको लागि समेत फलामको चिउरा चपाउनु सरह भयो । दिज्जू, मैले त तिमीलाई भनेकै थिए तिम्रो लागि राजनीती होइन भनेर तर तिमि पनि जिद्दी छौ के किनकी आज यो स्थान सम्म तिमि कसैको कृपाले आको पनि त होइनौ, तेसैले हरेक देशभक्त नेपालीले झै तिमीले पनि यो देश र सीटामोल नपाएर मर्न बाध्य जनताको बारेमा चिन्ता लिन्छौ, दिज्जू तिमीले गल्ती गर्यौ यो देशको बारेमा सोचेर, यो देश, राम्रो सोच्ने, राम्रो गर्नेहरुको लागि हुँदै होइन, तिमीले चाहेको भय आज बिदेशमा बसेर सुख को ज़िन्दगी बिताउन सक्थेयौ, तर तिमि आफ्नो सुख हैन दुःखी नेपालीहरुको बारेमा सोचेर बस्यौ, यो नै तिम्रो चौथो ठूलो गल्ती । तेसैले फेरी भन्छु ए मेरी दीदी राजनीती तिम्रो लागि हुदै होइन । राजनीती त भ्रस्टाचारी, काला ब्यापारी,र नेताहरुको पेवा सम्पति पो हो ।
म त तिम्रो बहिनी हूँ मेरो हर सास तिम्रो प्रगतिको कामना गर्दै फेर्ने छू र मलाई बिस्वास छ सत्य, सत्कर्म, निष्ठा र इमान्दारिता लाई पुज्नेहरुले पनि तिम्रो जयहोस भन्नेछन । नआत्तिनु सत्त्य र सत्कर्म गर्न चाहनेको एकदिन अबस्य बिजय हुन्छ । बिजयी भव,जयहोस सत्यको, जयहोस तिम्रो र जयहोस नेपाल आमाको ।
उही तिम्री प्यारी बहिनी प्रज्ञा सरद !
काठमाण्डौं- तर पनि लाग्यो..अब कमसे कम ईज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला। मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक […]